Jowhar.com - Somali news Leader - News: Maxay ka wada hadleen Madaxweynaha Soomaaliya iyo odayaal ka soo jeeda Beesha H/gidir
December 12 2013 19:47:40
Maxay ka wada hadleen Madaxweynaha Soomaaliya iyo odayaal ka soo jeeda Beesha H/gidir
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay Xarunta Madaxtooyada kula kulmay waxgarad iyo odayaal ka soo jeeda beesha H/gidir, isagoo kala hadlay arrinta Xasan Dahir Aweys oo gacanta dowladda ku jiro.
Kulankan oo ku saabsanaa sida laga yeelayo Xasan Dahir ayaa socday muddo saacado, iyadoo la is weydaarsaday fikrado iyo talooyin, waxaana Madaxweynaha uu ka raali geliyay ergadii Xasan dahir ka keentay degmada Cadaado.
Xasan Cilmi Yaxye oo ka mid ah odayaasha la kulmay Madaxweynaha ayaa sheegay in Madaxweynuhu qabsaday muddo todobaad ah in arrinta Xasan dahir wax looga qabanayo, isla markaana uu qaatay mas'uuliyada wixii ka dhacay Air Porka ee dhibaatadii loogu geystay odayaasha.
"Madaxweynaha wuxuu qaatay wixii mas'uuliyad ah ee halkaas ka dhacay iyo dhibkii odayaasha gaaray, waana ka xumahay ayuu yiri, anagana waxaa u jeedinay in Xasan Dahir meesha nabadsugida laga soo bixiyo oo meel kale munaasib oo dowladda gacanta ku heyso la geeyo, hadii nabadsguida meel fiican ka joogo xabsi ayaa loo yaqaan"ayuu yiri Caaqil Xasan Cilmi Yaxye.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Xasan Dahir ay u tageen 12-xubnood oo ku booqday halka lagu haayo, waxaana uu xusay in caafimaadkiisa uu wanaagsan yahay, isla markaana aanay waxba ka jirin wararka la isla dhex marayo in xaaladiisa caafimaad ay liidato.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Xasan Dahir laga yaabo in dowladda aqbasho in dalalka Qadar iyo Turkiga midkood loo dhoofiyo, todobaadyada soo socda, hase ahaatee wali ma kala cada, inkastoo beesha uu ka soo jeeda ay galaan gal arrintaas ugu jirto in la helo wadan magangalyo siiy.
Inkastoo aanay jirin war si rasmi ah uga soo baxay Madaxtooyada oo ku saabsan kulankan, ayaa hadana odayaasha waxay rajo ka muujiyeen wada hadaladaas, isla markaana ay gudi shan xubnood ka kooban ay u saareen arrinta Xasan dahir, kuwaasoo dowladda kala shaqeeynayo sida laga yeelayo.
Banaan baxyo hab qabiil u muuqday ayaa maalin ka hor ka dhacay qeybo ka mid ah degmada Hodan, kadib markii dadweyne isugu soo baxay ay dalbadeen in la sii daayo xasan Dahir oo ka soo baxsaday Al-Shabaab, dowladana isku soo dhiibay, waxaana taas ay weji cusub gelisay arrinta Xasan Dahir oo aanay wali dhinac u dhicin, dowladana gacanta ku heyso.
master on July 03 2013
0 Comments · 13367 Reads
jowhar.com3,184,189 unique visits